Ciidamada Somalia Ee Saldhigyadooda Isaga Yaacay ,Waxay Dhabar Jab Weyn Ku Keentay Xukuumada Farmaajo |
Ciidamada Somalia Ee Saldhigyadooda Isaga Yaacay ,Waxay Dhabar Jab Weyn Ku Keentay Xukuumada Farmaajo
Xukuumadda Soomaaliya ee Ciidamada Ajaaniibta ahi ku ilaaliyaan Villa Soomaaliya ayay xaaladdu wakhtigan ku sii xumaanaysaa kadib markii dhawr aag oo ku kala yaalla Gobolada Shabeelaha Dhexe, Shabeelaha Hoose iyo Maamul Goboleedka Hir-shabeele ay isaga soo baxeen ciidamada Soomaaliya kuwaasi oo ka gadooday Mushahar la’aan iyo nolol xumo dhinaca maciishada ah.
Cabashada ciidamada Soomaaliya ee fadhiisimadooda isaga baxay waxa ay walaac weyn ku abuurtay dawladda Madaxweyne Farmaajo oo marka horeba awooddeedu ku urursanayd bedka ay ku fadhido Xarunta Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya iyo dhawr meelood oo Muqdisho ku yaalla oo ay fadhiyaan Ciidamada Nabad Ilaalinta Midawga Afrika ee AMISOM taasi oo iyana ay xaaladda sii xumaynayso kadib markii dalka Maraykanku Toddobaadkii hore ku dhawaaqay in uu gabi ahaanba yaraynayo kaalmadii dhaqaale ee uu siin jiray ciidamada Afrikaanka ah ee Ilaaliya dawladda Soomaaliya. Taasi oo keentay in dhinaca kale dalal dhawr ah oo Afrikaan ahi ku dhawaaqaan in ay ciidamadooda kala bixi doonaan Soomaaliya maadaama aanay u ahayn dhaqaale ay ku sii hawl galiyaan.
Cabashada nolol xumada iyo Mushahar la’aanta Ciidamada Dawladda Soomaaliya oo sannadkii ugu dambeeyey oo dhan soo taagnayd waxa ay keentay in shacabka iyo dadka la socda Arrimaha Soomaaliya walaac weyn ka muujiyaan sida ay xaaladdu noqon doonto maadaama marka horeba awoodda ciidan ee dawladda Farmaajo ahayd mid aad u liidata haddii arrintanina ugu biirtona ay keenayso in ay dawladdu awood u yeelan waydo xataa in ay fadhido Villa Soomaaliya oo ah xarunta Madaxtooyada Muqdisho.
Waa kuwan Qaar ka mid ah saraakiishii ciidamada Soomaaliya ee isaga soo baxay saldhigayada ay ku lahaayeen Gobolka Shabeelaha Dhexe oo si dhab ah uga hadlaya noloshooda iyo waxa keenay in ay isaga soo baxaan goobihii ay ku sugnaayeen.
Afar arin ayay ku sheegeen qodobada ay soo bandhigeen saraakiisha ciidamada hogaaminaya kamid ah:-
1- Mushaar, raashin iyo Iidaan ayaa naga maaan 4 bil, walina ma dhicin In raashin ay waayaaan ciidanka.
2- Daryeel xumo iyo dalacsiin la’aan muddo sanado ah
3- Waa bixinay mushaar oo dowladdii ay leedahay
4- Markaan ka hadalno Waxaa nala leeyahay siyaasad ayaa idinka soo ureysa.
Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamadan gadooday waxa ay dawladda Muqdisho ku tilmaameen mid ku jirta xafiisyo qaboojiyayaal ku xidhan yihiin oo ku kooban Villa Soomaaliya halka ay xil-dhibaanada maamulkaasi ku tilmaameen kuwo intooda badan ka yimid dibadda oo baasaabooro shisheeye sita waligoodna aan arag gobollada ay sheegtaan in ay matalaan.
Khubarada u kuur-gasha Arrimaha Ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya waxa ay tallaabada gadoodka ciidamada soomaaliya ku tilmaameen mid dhabar jab weyn ku noqon doonta xukuumadda Farmaajo oo Malaayiin dollar ku qaadata Mashaariicda dib u dhiska dalkaasi balse aan la aqoon halka ay lacagahaasi galaan. Waxaanay arrintani sii xoogayn doontaa niyadda iyo mooralka kooxda Alshabaab ee dagaalka kula jirta dawladda Soomaaliya oo sannadkan ugu dambeeyey laban laabtay dagaallada ka dhanta ah dawladda, waxaana durba dhacday in ay Alshabaab qabsadeen fadhiisimo ay isaga baxeen ciidamada Nabad Ilaalinta AMISOM iyo kuwa ciidamada soomaalidu.
Dalalka Midawga Yurub iyo Maraykanka oo ah kuwa dhaqaalaha ugu badan siiya Dawladda Soomaaliya ayaa walaac weyn ka muujiyay hannaanka dhismaha dalkaasi oo ay sheegeen in aanay xukuumadda wakhtigan joogtaa awood u lahayn in ay wax ka qabato amniga iyo nabad ilaalinta dalka oo ah arrinta ugu mudan ee ay u oomman yihiin shacabka waddanka Soomaaliya.
Culayska arrintani waxa uu meel adag dhigayaa madaxweyanaha Dawladda Soomaaliya iyo Ra’iisal wasaarihiisa oo oo halku dheggii ay doorashada ku galeen ahayd NABAD IYO NOLOL, taasi oo u muuqata mid gabi ahaanba uu ku fashilmay maadaama qaraxyadii caasimadda Muqdisho laban laabmeen wax horumar ah oo ay ka gaadhay xukuumaddiisu qabsashada gobolada Alshabaab haysatana aanay jirin.
Xukuumadda Farmaajo waxa kale oo lagu dhaliilayaa hannaanka ay u maamuleen malaayiin dollar oo deeqo loo siiyo iyo sidoo kale sida aanay isaga xil saarin daryeelka iyo wax ka qabashada baahiyaha aasaasiga ah ee ciidamada dawladda oo ahaa marka horeba ciidamado ururis ah oo hannaan beelaysan loo soo ururiyay askari kastaana xilliga uu doono ku laaban karo isaga oo hubaysan deegaankiisa sida haddaba dhacday.
Siyaasiyiin badan oo Mucaarid ku ah dawladda iyo dalalka sida gaarka ah u daneeya arrimaha Soomaalidu waxa ay ku doodayaan in fashil weyni ku yimid Farmaajo iyo xukuumaddiisa oo ay adag tahay in ay ka soo kabtaan inkasta oo ay wali niyad u hayaan safarro xidhiidh ah oo ay ku gaalaa bixiyaan dalalka ay xidhiidhka leeyihiin.
Ugu dambayn Ilo-diblomaasiyadeed oo u dhuun daloola arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya in bixitaanka ciidamada Afrikaanka ahi ay dhaawac weyn ku keenayso dawladda Farmaajo wakhti deegaanno kala duwan oo ku yaalla Gobolada Shabeelaha Hoose, Shabeelaha Dhexe, Hiiraan iyo goobo kale oo Koonfurta ah ay ka baxeen ciidamo Afrikaan ah iyo kuwa soomaalidu halkaasi oo ay si tartiib tartiib ah u qabsadeen kooxda Alshabaab.